American, Spirit, Southwest Airlines: Chii chakaitika kune 79 Bhirioni Bailout?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » American, Spirit, Southwest Airlines: Chii chakaitika kune 79 Bhirioni Bailout?
Airlines • Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Airlines muUnited States akagamuchira anopfuura $ 79 bhiriyoni mumari yekubvisa pamabhiri matatu ane chekuita neCOVID muna 2020-2021 kuvabatsira, vashandi vavo, uye indasitiri yekufamba nendege vapone padambudziko rakaipisisa reCOPVID. Congress yaida kuti mari iyi iende kune vatyairi vendege, vanoshanda nendege, uye vamwe vashandi vendege nevashandi vepanhandare kuti vaone kuti vakabhadharwa panguva yakanyanya kushushikana yekuda uye kuona kuti ndege dzendege dzinokwanisa kusangana nekuwedzera kwekushanya kwekuda nekukurumidza apo Covid mamiriro ezvinhu akavandudzwa.
FlyersRights, sangano rinotsigira vatengi rakadaidzira musangano wekutarisa nevatungamiriri venhandare pamwe nevamiriri vevashandi nevapfuuri.
Ndege dzakapihwa muhomwe dzakakura dzemubatanidzwa kuti dzichengete veruzhinji mweya mhepo yakasimba uye kudzikisira hutachiona hweCOVID.
Ichangoburwa rekodhi kukanzura kwakawanda, kunonoka kwendege, pamwe nekushora kwendege kune mamwe akakosha maCDC nhungamiro zvinopokana kana mari yemubhadhari yashandiswa zvisirizvo nevekufambisa ndege
"American Airlines, Spirit Airlines, uye Southwest Airlines, zvakundikana zvachose vanhu veAmerica"
FlyersRights.org mutungamiri Paul Hudson
Yakakura Ndege Kudzima
Mukati mezhizha, ndege dzendege dzakadzima mazana erwendo pazuva nekuti dzaive dzisina vashandi vakakwana vakagadzirira kuenda. Pazuva rayo rakaipisisa, Spirit Airlines yakanzura inopfuura hafu yendege dzakarongwa.
Izvi hazvigamuchirwe, uye Senator Maria Cantwell, Sachigaro weSeneti Commerce Committee, akatumira tsamba nezvenyaya iyi kumahofisi evaenzi muna Chikunguru. FlyersRights.org akasangana nevashandi vake kuti vakurukure nyaya iyi munaGunyana 1st uye kupa mhinduro kune ichangoburwa yendege kushungurudzwa.
Imba Yekutarisa Komiti Yekunzwa yakakumbirwa
FlyersRights.org yakakumbira komiti yekutarisirwa kwekunzwa kumanikidza Doug Parker, Gary Kelly, Ted Christie, nevamwe maofficial eairline kuti vatsanangure zvavakaita nemari yekubatsira yeCOVID uye kuti nei ndege dzavo dzakundikana kuendesa zvaida mutemo.
Kutarisirwa kwekutongwa kunofanirawo kusanganisira vamiririri vevapfuuri pamwe nevamiriri vevashandi. FlyersRights.org yakaronga hurongwa hwekukurudzira uye hwekudyidzana hunogona kunge huchiita kuti ndege dziwane purofiti, dzichimhanya zvakanyanya panguva yedenda, uye zvaizopa kuti kufamba kwemhepo kuve kwakachengeteka, zvese nemutengo wakaderera pane mapakeji ekubailout.
FlyersRights.org ndiro rakakura sangano revatambi vendege; inotsigira vatakuri vendege pamberi peFAA, DOT, TSA nemamwe masangano ehurumende